I-Android Q iza kuza kwiPocophone F1 xa isungula | I-Androidsis
Kutshanje, uXiaomi ubhengeze ukufika kokugqibela kwePie ye-Android 9.0 kwiPocophone F1. Ngoku, ukuze ungalindi ixesha elide, inkampani iyityhilile loo nto Isiphelo siza kufumana uhlaziyo kwi-Android Q, yakuba ikhutshiwe, kunjalo.
Oku kuphakamisa ukuba Inguqulelo elandelayo ye-Android izakuvela kunyaka olandelayo, ephikisana namanye amarhe abonisa ukuba kunokwenzeka ukuba kwaziwe ngo-2020.
Ukuqinisekiswa kwale nyaniso bekukho Ikhutshwe nge-Twitter nguMphathi weMveliso uJai Mani, umphathi omkhulu wenkampani oqhele ukwenza ukubonakala okuncinci kunye neengxelo kuluntu. Impapasho ifunda oku kulandelayo:
Siza kwenza ubuncinci u-P kunye no-Q
-UJai Mani (@jaimani) Oktobha 28, 2018
Ngokucacileyo kufuneka ifumane iPie ye-Android 9.0 kuqala, esele iza kwenziwa emva kohlaziyo olusondeleyo oluya kukhutshwa yinkampani kwiintsuku ezimbalwa ezizayo nge-OTA, ngokwesiko. Ngenxa yoku, sicebisa ukuba, xa le nguqulo ikhutshiwe, esi sixhobo sihlawuliswe kakuhle kwaye siqhagamshelwe kwisantya esiphezulu senethiwekhi ye-Wi-Fi ukunqanda ukusetyenziswa kwedatha kunye nokugqiba inkqubo ngokukhawuleza. Le nguqulo iya kufika phantsi komgangatho wokwenza ngokwezifiso we-MIUI 10, ngelixa I-Android Q yayiza kufika nolusu olulandelayo lwento efanayo, nangona sinokuqikelela kuphela kuloo nto.
Ukuphononongwa kancinci kweempawu kunye neenkcukacha eziphambili zobuchwephesha ze Xiaomi Pocophone F1, sifumanisa ukuba ine-6.18-intshi ye-diagonal FullHD screen + phantsi kwe-19: 9 ifomathi yokubonisa enotshi kuyilo lwayo, iprosesa ye-Snapdragon 845 kunye ne-Adreno 630 GPU, 6 okanye 8 GB ye-RAM kunye ne-64/128 / I-256 GB yendawo yokugcina yangaphakathi.
Ngakolunye uhlangothi, isiphelo esiphezulu sisebenzisa ibhetri ye-3.400 mAh, Inkqubo yokupholisa ulwelo, i-Android 8.1 Oreo (okwangoku) kunye nezivamvo ezimbini zasemva kweefoto ze-12 kunye ne-5 MP resolution. Ikwanekhamera yangaphambili ye-megapixel engama-20 enezibonelelo ze-AI, kunye nezo zinemva.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » UXiaomi uya phambili komdlalo: iPocophone F1 iya kufumana i-Android Q xa isungula
Ngaba kufanelekile ukuvuselela i-OnePlus 5 / 5T ye-OnePlus 6T entsha?